"Zvinokanganisa Kunaka": New Apple Music Ads Starring Taylor Swift na Drake | Ndinobva mac
Sezvo zviri zvakajairwa maitiro, isu tine akawanda uye akawanda Apple Music kushambadzira. Munguva pfupi yapfuura, Apple yakaburitsa shambadziro mbiri nyowani pane yayo yepamutemo YouTube chiteshi zvinotaurwa kuApple Music. Pasi pe sirogani "Zvinoshamisa Zvinoshamisa", Taylor Swift ndiye protagonist weumwe wavo uye Drake ndiye mutambi mukuru mune imwe.
Iine vese vaimbi vane mukurumbira seva protagonists, Apple inotiratidza kuti Apple Music inokamura sei zvinyorwa zvayo zvinoenderana nezviitwa. Nekudaro, iyo Cupertino-based kambani inoratidza vashandisi nzira yekuwana iyo "playlists" yakagadzirirwa chiitiko chega chega.
Iwo ma ads, kupi Taylor Swift anoimba rwiyo rwaDrake paunenge uchimhanya pane yekutsikira, uye Drake anoita zvimwechetezvo achiita chipfuva kurovedza nenziyo yaTaylor, vakapoteredzwa pasi pechirogwa "Zvinoshamisa Zvinoshamisa", icho chingave chinhu chakadai se "absentmindedly good."
Shambadziro ine protagonist iri Taylor, Inova inokurumidza gwara rinotakura isu kubva kumenyu "Zvako", kumusoro kune playlist zvichibva pane zvatinoda, zvichienderana nebasa ratiri kuita panguva yakapihwa.
Iyo inoshandisa seye protagonist Drake, inotibvumidza isu kuziva iyo «Ongorora» basa, uko kune zvimwe zvinyorwa zvakagadzirwa neApple Music.
Aya ma ads zvakare ari chikamu che mushandirapamwe wakagadzirwa naApple kushambadza mashandiro ayo matsva uye kukubatsira kuti unzwisise kuti iOS 10 inoshanda sei.Tine chivimbo chekuti ticharamba tichiona aya marudzi ezvishambadziro zveApple Music kwemwedzi inotevera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » "Zvinokanganisa Kunaka": Nyowani Apple Music Ads inotamba naTaylor Swift naDrake
Limbo, inowanikwa paMac App Store pane chakakosha mutengo
Matipi ekuti uwane zvakanakisa kubva kune yako nyowani MacBook Pro neTouch Bar